Vaovao - Momba ny ketchup
Ny firenena mpamokatra saosy voatabia manerantany dia zaraina any Amerika Avaratra, ny morontsirak'i Mediterane ary ny faritra sasany any Amerika atsimo. Tamin'ny taona 1999, ny fanodinana eran-tany ny fijinjana voatabia, ny vokatra namboarina voatabia dia nitombo 20% avy amin'ny 3,14 tapitrisa taonina tamin'ny taon-dasa ho lasa 3.75 tapitrisa taonina, nahatratra ny ambaratonga avo indrindra teo amin'ny tantara. Nihoatra ny tinady ny famatsiana akora sy vokatra, ka firenena maro no nampihena ny velaran-tany fambolena tamin'ny taona 2000. Ny totalin'ny vokatra akora voatabia ho an'ny fanodinana any amin'ireo firenena mpamokatra 11 lehibe tamin'ny 2000 dia manodidina ny 22,1 tapitrisa taonina, izay 9 isanjato ambany no ambany noho izay voarakitra tamin'ny taona 1999. Ny firenena Etazonia, Torkia ary ny tandrefana dia nihena 21%, 17% ary 8% avy. Chile, Espana, Portugal, Israel ary ny firenena hafa koa dia nanana fihenan'ny famokarana akora voatabia voahodina. Ny fihoaram-pefy tamin'ny taon-dasa koa dia nahatonga ny famokarana voatabia lehibe tamin'ny taona 2000/2001 Ny totalin'ny vokatra paty voatabia tany amin'ireo tany mpamokatra (afa-tsy Etazonia) dia nihena manodidina ny 20% teo ho eo, fa ny totalin'ny fanondranana dia nitombo 13% raha ampitahaina amin'ny ny taona lasa, ny ankamaroany dia avy any Italia, Portugal ary Gresy.
Etazonia no mpamokatra sy mpanjifa ny vokatra voatabia lehibe indrindra eto an-tany. Ny voatabia voahodina dia ampiasaina hamokarana ketchup. Tamin'ny taona 2000, ny fihenan'ny famokarana voatabia nokarakaraina dia nanamora indrindra ny fanisana ny vokatra voatabia tamin'ny taona lasa ary hampiakarana ny vidin'ny vokatra ketraka vokatry ny fanidiana ny mpamboly tri Valley, mpamokatra vokatra voatabiha lehibe indrindra. Tao anatin'ny 11 volana voalohany tamin'ny taona 2000, ny fanondranana ny vokatra voatabia amerikana dia nihena 1% raha oharina amin'ny vanim-potoana tamin'ny taona lasa, raha 4% kosa ny vokatra voatabia. Kanada no mbola mpanafatra ny paty voatabia sy vokatra hafa avy any Etazonia. Noho ny fihenan'ny fampidirana any Italia dia nihena 49% ary 43% tamin'ny 2000 ny habetsahan'ny fanafarana vokatra voatabia any Etazonia.
Tamin'ny 2006, ny totalin'ny fanodinana voatabia vaovao eto amin'izao tontolo izao dia manodidina ny 29 tapitrisa taonina, miaraka amin'ny Etazonia, ny Vondron Eropeana ary i Sina no isan'ireo telo voalohany. Araka ny tatitra nataon'ny fikambanana voatabia manerantany, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny 3/4 amin'ny totalin'ny vokatra fanodinana voatabia eto amin'izao tontolo izao dia ampiasaina hamokarana paty voatabia, ary ny vokatra isan-taona an'ny paty voatabia eran'izao tontolo izao dia manodidina ny 3,5 tapitrisa taonina. Sina, Italia, Espana, Torkia, Etazonia, Portugal ary Gresy dia mitentina 90% amin'ny tsena fanondranana voatabia manerantany. Nanomboka ny taona 1999 ka hatramin'ny 2005 dia nitombo hatramin'ny 7.7% ka hatramin'ny 30% ny tsena fanondranana voatabia tany Sina, raha toa kosa ny mpamokatra hafa dia nampiseho fironana ambany. Italia dia nidina hatramin'ny 35% ka hatramin'ny 29%, Torkia tamin'ny 12% ka hatramin'ny 8%, ary i Gresy tamin'ny 9% ka hatramin'ny 5%.
Ny fambolena voatabia, ny fikarakarana ary ny fanondranana voatabia any Shina dia mitombo hatrany. Tamin'ny 2006, nanamboatra voatabia vaovao 4,3 tapitrisa taonina i Sina ary namokatra paty voatabia efa ho 700000 taonina.
JUMP MACHINERY (SHANGHAI) Vokatra lehibe voafetra dia ny paoma voatabia, voatabia voahidy na potika potika, paty voatabia efa niotrika, vovo-voatabia, lycopene, sns. 30% sy 36% - 38%, ny ankamaroany dia fonosina anaty harona aseptika 220 litatra. 10% -12%, 18% -20%, 20% -22%, 22% -24%, saosy voatabia 24% -26% feno kapoaka vita amin'ny tinplate, tavoahangy PE sy tavoahangy fitaratra.